Ebe nchekwa mpaghara Kildare - IntoKildare
Obodo na obodo Kildare
Nwee ọmarịcha nnabata na obere obodo. Na-emikpu onwe gị na ụlọ ndị Palladian na ihe nketa oge ochie, detụ nri na-atọ ọnụ ụtọ ma nweta ezigbo ọdịnala Irish.
Ihe nketa pụrụ iche, ọmarịcha ebe obibi, ezigbo ebe obibi, nri dị egwu na ịzụ ahịa klaasị ụwa bụ naanị ụfọdụ ahụmịhe na -echere gị nke ọma n'ọgbakọ na obodo anyị.
Maka njem otu ụbọchị, ma ọ bụ ngwụsị izu, nwee ọ accessụ ịnweta site n'akụkụ niile nke Ireland. Chọpụta anwansi nke ala dị larịị, ọmụmụ agbụrụ, egwuregwu golf, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe ihe nketa, ahụmịhe ezinụlọ na -atọ ụtọ, ọwa mmiri na ije n'oké ọhịa. Kildare bụ nke kacha mma na Ireland n'otu mpaghara.
Obodo ọmarịcha ahịa a dị n'akụkụ Osimiri Barrow bụ ebe ọmụmụ nke onye na-eme nchọpụta Arctic a ma ama bụ Sir Ernest Shackleton. Were njem ụgbọ mmiri leisurely ebe ị ga-eri mmiri gburugburu oge ochie.
Chọpụta ọgaranya akụkọ ihe mere eme na nketa nke a maa mma Liffeyside obodo. Chọọ akụkọ banyere Arthur Guinness, jee ije na ọdụ ụgbọ mmiri dị jụụ ma gaa na ụfọdụ 'Nnukwu Biglọ' nke Georgia Georgia.
Clane (“slanted ford”) bụ ebe akụkọ mgbe ochie na akụkọ ihe mere eme. Dị ka ebe agafe na Liffey, e guzobewo ya kemgbe Nkume Oge. Ije ije na sinik bịara n'ikperé mmiri nke Liffey ma ọ bụ gaa na anụmanụ ugbo na ezinụlọ.
Kildare bara ọgaranya na ọdịbendị, nketa, ịzụ ahịa na ebe nkiri. Wepụta otu ụbọchị na agbụrụ dị na Curragh Racecourse, ụwa a ma ama, weghaa azụmahịa ndị na-emepụta ihe na ụlọ ahịa anyị na ndị na-eri nri ga-enwe obi ụtọ na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ winningụ awardụ na-eto eto na gastro-pub.
Leixlip, nke dị na njikọta nke osimiri abụọ, The Rye & the Liffey, nwere ọtụtụ ọrụ na ụzọ dị n'èzí. Guzoro n'ụsọ n'ụdị ụlọ a na-adịghị ahụkebe na-adịghị ahụkebe, Ogige Dị ebube, hapụ ụmụaka ka ha gbaa ọsọ na Fort Lucan, ma banye egwuregwu golf na magburu onwe ya Palmerstown Estate.
Obodo mepere emepe nke Maynooth bụ naanị obodo mahadum dị na Ireland yana ebe dị egwu jupụtara na njem, kọfị, ebe a na-eri nri na ihe ị ga-eme. Ọ bụ Maynooth Castle deziri ya na otu njedebe obodo ahụ, yana narị afọ nke 17 Carton House na nke ọzọ.
N'ime ime obodo Naas ị nwere ike ịkwụsị nrụgide na mmemme mba dị ka ịnyịnya, golf na nleta na nnukwu ụlọ ochie. Naas dị na Grand Canal nke narị afọ nke 18, nke mara mma dị ka eserese, ma n'ezie, mpaghara ahụ bara ụba na ọdịbendị nwere oke agbụrụ na ọtụtụ agbụrụ ịgba ọsọ na ugbo ugbo.
Dị ka obodo kachasị ukwuu na Kildare, Newbridge nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye. Were ihe ngosi na Riverbank Arts Center, bulie mpempe akwụkwọ pụrụ iche na Newbridge Silverware a ma ama ma ọ bụ were egwuregwu GAA siri ike.